Tsidiho i Athy mahafatifaty ao amin'ny County Kildare ary zahao ireo trano mimanda vato taloha, làlana mandeha an-tongotra miala sasatra ary trano manja mahafinaritra.
Athy dia iray amin'ireo tanàna lova roa ao Kildare ary nanjary tanàna tsena noho ny lakandrano sy ny renirano - dia eto ny River Barrow mihaona amin'ny sampana Athy an'ny Grand Canal. Fantatra iraisam-pirenena i Athy amin'ny fampiantranoana ny Sekolin'ny Fararano Shackleton ho fanomezam-boninahitra ilay mpikaroka mpikaroka malaza, Ernest Shackleton, izay teraka tany Kilkea tsy lavitra teo ary raha ny marina dia io no tokana fampirantiana maharitra natokana ho an'ny mpikaroka. Jereo ny tantaran'ny Quakers any Kildare amin'ny fitsidihana an'i Ballitore sy Burtown House & Gardens, na mitsangantsangana manamorona ny Ony hahitanao ny tanàna amin'ny lafiny hafa. Zahao ireo toerana nolovaina tamin'ny lova naparitaka nanerana ny faritra toa ny Castle Kilkea sy ny Castle White, izay avy tamin'ny andron'ny Normans sy Fitzgeralds (Earls of Kildare), ary ireo 12th taonjato maro Moate of Ardscull dia malaza ratsy amin'ny angano an'ny "vahoaka kely".
Top fahitana any Athy
Trano tranombakoka no fampirantiana maharitra tokana eto amin'izao tontolo izao natokana ho an'i Ernest Shackleton, ilay mpikaroka polar lehibe.
Vatosoa miafina mivarotra entana maro karazana fanomezana vita amin'ny tanany avy amin'ny mpanefy tanimanga, mpanakanto ary mpanao asa-tanana. Kafe sy trano fivarotana eo an-toerana.
Zavatra tsara folo hatao manodidina an'i Athy
Mahavariana mamelana: zaridaina tsara indrindra any Kildare
5 amin'ireo toerana piknikana tsara indrindra any Kildare
Tantara avy amin'ny Waterways: Athy Boat Tours
Inona no hataon'i Shackleton?
Tale fiaretana sy fahantrana
Jereo bebe kokoa ao Athy
Zavakanto & KolontsainaCommunity
OutdoorsMandeha an-tongotra sy mandeha an-tongotra
Café mihodinaPubs & NightlifeGastro-PubsBed & BreakfastMpinamana
Zavakanto & KolontsainaCafé mihodina
Adventure sy hetsikaFianakaviana ankohonany
Lova sy tantaraTrano sy zaridaina
Bed & BreakfastMpinamana
Trano fiompiana Blackrath
Bed & BreakfastSariaka amin'ny biby
OutdoorsTrano sy zaridainatrano fisakafoanana
Pubs & NightlifeSakafo mahazatra